हिमाल खबरपत्रिका | 'पीडितले न्याय नपाए विदेशी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ'
'पीडितले न्याय नपाए विदेशी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ'
द्वन्द्वपीडितहरूले त आयोग 'आममाफी आयोग' मा रुपान्तरण हुने आशंका गरिरहेका छन् नि!
यतिवेला हामी पीडितहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं। उहाँहरूको आलोचनात्मक समर्थन पाइरहेका छौं। आयोग गठनताका देखिएका पीडितका कतिपय चासो आज पनि जायज छन्। ऐनमा भएका त्रुटि संशोधनका लागि हामीले संस्थागत निर्णय गरिसकेका छौं। ऐनमा अपरिभाषित 'गम्भीर अपराध' र 'गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराध' स्पष्ट पार्न भनेका छौं।
द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले हुँदै नभएका ३९ सय द्वन्द्वपीडितको नाम शान्ति मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। आयोगले यस्ता गलत प्रवृत्तिविरुद्ध कसरी 'डिल' गर्छ?
तपाईंले आयोगको सिफारिशलाई गम्भीरसाथ नलिए धेरैले 'कर्णेल कुमार लामाकै नियति' भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यसको अर्थ के हो?
पीडक र पीडित दुवै पक्षले मिल्न चाहेमा मात्र मेलमिलाप सम्भव छ। पहिल्यै मिलेर बसिसकेका छन् भने आयोगले घाउ कोट्याउँदैन। र 'तपाईंहरू मिल्नैपर्छ' पनि भन्दैनौं।